« Ity tany ity fandalovam-bahiny… ». - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady 8 novambra 2020
Alahady Tsotra 32A
Fah. 6, 12-16; 1Tes. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13
Manomboka amin’ity Alahady faha 32 ity sy ireo Alahady roa manaraka azy dia ny santionan’ireo fampianaran’i Jesoa momba ny Eskatolojia (na ny amin’ny andro farany; ny any am-parany any) no atolotry ny evanjelin’i Md Matio hodinihina (Mt 25,1-46). Amin’ny alalan’ny fanoharana hatrany no entin’i Jesoa mampita an’izany fampianarany eskatolojika izany. Ny fanoharana momba ireo virijiny folo ; ny fanoharana momba ny talenta ; ny amin’ny filazana ny fitsarana farany hataon’ny Zanak’Olona rehefa ho avy amim-boninahitra Izy amin’ny andro farany – any am-parany any. Ny amin’ny virijiny folo àry no hodinihina amin’ity alahady anio ity.
« Ny fanjakan’ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo izay naka ny fanalany, ka lasa nitsena ny mpampakatra sy ny ampakarina ». Oharin’i Jesoa ho toy ny lanonan’ny fampakaram-bady eto ny fanjakan’ny lanitra. Misy ny mpampakatra, misy ny ampakarina, eo ihany koa ny mpanotrona amin’ny fampakarana. Ny mpampakatra dia i Jesoa Kristy ihany. Ny fotoana fiandrasana ny mpampakatra dia ny elanelam-potoana hatramin’ny nitsanganany tamin’ny maty ka hatramin’ny fiaviany amim-boninahitra indray amin’ny andro farany. Ireo virijiny folo dia tandindon’ny olombelona rehetra miandry ny fiavian’ny i Kristy Ilay mpampakatra. Ao ireo malina sy vonona ao kosa ireo variana loatra ka tsy mitsinjo ny ho farany…
« Ny dimy tamin’izy ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry ». Ireo virijiny dimy adala dia ireo izay miandry ny fiavian’ny mpampakatra saingy tsy mba misy fiomanana, nitondra fanala fa tsy nivatsy solika, tsy misy fiheverana fa ho lava ny fotoana ary mila fiomanana hatrany fa dia mionona amin’ny anio ary tsy mitsinjo ny hoavy, hany ka nony tonga ny farany vao mitady vonjy amin’ny namana saingy diso aoriana loatra ka ho voahidy any ivelany. Ireo virijiny dimy hendry kosa dia ireo izay miandry amim-pahavononana ka nitondra fanala sy solika satria efa nanampo ny mety haha ela ny fiavian’ny mpampakatra; ireo izay mitojo andro aman’alina hampitombo ny finoana, ny fanantenana, ary ny fitiavana; ireo izay mikezaka hatrany hamelombelona ny fiainam-panahiny.
Fotoana fiandrasana izao androntsika izao; fotoana ifandimbiasan’ny andro sy ny alina, ny maizina sy ny mazava, ny soa sy ny ratsy; fotoana fisedrana ny faharetana. Fotoana lava mbola omen’Izy Tompo ny olombelona anefa mba hiomanany amin’ny fihaonana Aminy ho avy amim-boninahitra, fitsenana ilay mpampakatra efa nandrasana hatry ny ela ; fotoana itehirizana hatrany ilay jiro narehitra tamin’ny batemy tsy ho resin’ny haizina ; fotoana fikatsahana hatrany ilay Fahendrena (vakiteny voalohany) ao anatin’ny vavaka sy ny fahanginana na dia eo aza ny tabataban’izao tontolo izao sy ny fanadinoany an’Andriamanitra Ray Mpahary. Fotoana iheverana hatrany ny fahamalinana sy ny fitsinjovana ny farany sao iharan’ny ohabolan-drazana hoe : « Fony be tsy mitsitsy, ka efa kely vao mikaroka, nony misy vahiny vao manao sosoa »
« Miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora ». Fotoana fiheverana ny farany, fandinihana ilay ora farany honenana amin’ity tany ity fa “’Ty tany ity fandalovam-bahiny, fa tsy tanàna natao fonenantsika. 'Zao foko 'zao tsy mba aoriko eto, fa ny tanànan'i Jesoa no andraina”, hoy ny hira katolika... Ho avy amin’ny ora tsy ampoizina ny Tompo ; mety ho avy amin’ny misasak’alina toy ny niaviany tamin’ny fahaterahany tao Betlehema Izy, saingy tsy ho mangingina intsony fa ho avy amim-bonihanitra miaraka amin’ny feon’arakanjely sy ny feon-trompetran’Andriamanitra ny Tompo (vakiteny faharoa). Manantena ny olombelona handray azy amim-pahavononana Izy ka izay efa nivonona sy niandry amim-paharetana dia hiara-mandroso Aminy ho ao amin’ilay lanonan’ny fampakaram-bady. Ireo tsy mba màlina sy tsy nitsinjo ny farany kosa dia ho voahidy any ivelany ka na hiantso ny Tompo aza tsy hohenoiny intsony...
Ampio amin’ny fahasoavanao izahay ry Tompo mba tsy ho sondriantory sy ho varimbariana fa hanana ny faharetana sy hafanam-po ary ho vonona handray Anao amin’ny andro hanaovanao « haody » eo am-baravaranay.